Mpiandry tsara - Wikipedia
Ny hoe Mpiandry tsara dia voambolana iantsoan' i Jesoa ny tenany (Joa 10.11). Iray amin' ireo teny fito nataon' i Jesoa ahitana ny hoe "Izaho no" izay tsy hita afa-tsy ao amin' ny Evanjelin' i Joany sady miresaka am-panoharana ny endrika iray ananan' ny asa fanatanterahana iraka nataony: dia ny hanangona, ny hitarika, ny hitady (izay mania) ary ny hanolotra ny ainy ho an' ny hafa. Andrasany ny ondriny na averiny ny ondry mania.
Ny Mpiandry Tsara, sary nataon' i Jean-Baptiste de Champaigne.
Atao hoe ποιμήν ὁ καλός / poimḗn ho kalós ny hoe "mpiandry tsara" amin' ny teny grika.
Ny endrik' io andian-teny "mpiandry tsara" io amin' ny teny frantsay (bon pasteur) na anglisy (Good Shepherd), izay azony tamin'ny teny latina hoe bonus pastor, no niandohan'ny fampiasan' ny Kristiana ny teny hoe "pasitera" na "pastora".
Izany fanoharana izany dia nampiharina mandrakariva amin' Andriamanitra ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly, toy izay hita ao amin' ny Salamo 23 ("Ny Tompo no mpiandry ahy" na "Jehovah no mpiandry ahy") sy ny Ezekiela 34.12 ("Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny, amin' ny andro hitsanganany eo amin' ireo ondriny mihahaka no handinidinihako ny ondriko; ary hesoriko izy ireo, hiala any amin' ny tany rehetra efa nielezany tamin' ny andro mandrahona sy manjombona.") ary ny Isaia 40.11 ("Toy ny mpiandry ondry hiandry ny andian' ondry izy; handray ny zanak' ondry amin' ny sandriny, hitondra an' ireny eo an-trotroany, ary handroaka moramora ny mampinono.").
Hita ao amin'ny Testamenta Vaovao ny fanoharana ny amin' ny ondry nania ao amin' ny Evanjelin'i Lioka (Lio. 15.3-7), ary ao amin' ny tenin' i Jesoa hoe "Izaho no mpiandry tsara" ao amin' ny Evanjelin' i Joany (Joa. 10.11-16). Isan' ireo fitenenana nanafintohina ny Jiosy ny filazany ny tenany ho "mpiandry tsara" (Joa. 10.19-21). Oharina amin' ny mpiandry ondry ihany koa i Jesoa ao amin'ny Evanjelin' i Matio (Mat. 2.6; 9.3; 25.32; 26.31), ao amin' ny Evanjelin' i Marka (Mar. 14.27), ao amin' ny Evanjelin' i Joany (Joa. 10.2), ao amin' ny Epistily ho an' ny Hebreo (Heb. 13.20), ao amin'ny Epistily voalohan' i Petera (1Pet. 2.25, 1Pet. 5.4) ary ao amin' ny Apokalipsy (Apo. 7.17).
Ankehitriny, ao amin' ny litorjian' ny fiangonana, ny Alahady fahefatry ny Paska no atao hoe "Alahadin' ny Mpiandry Tsara".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpiandry_tsara&oldid=999039"
Dernière modification le 17 Desambra 2020, à 11:26
Voaova farany tamin'ny 17 Desambra 2020 amin'ny 11:26 ity pejy ity.